Ahlu-Sunna oo isku tegay meel u dhow Dhuusomareeb, sheegay bartilmaameedkooda - Caasimada Online
Home Warar Ahlu-Sunna oo isku tegay meel u dhow Dhuusomareeb, sheegay bartilmaameedkooda
Ahlu-Sunna oo isku tegay meel u dhow Dhuusomareeb, sheegay bartilmaameedkooda
Bohol (Caasimada Online) – Tan iyo markii Xoogaga Ahlu Sunna ay Arbacadii isaga baxeen Magaalada Guriceel ayaa waxaa la soo sheegaya in ay isku uruursanayaan deegaanka Bohol, oo dhinaca waqooyi kaga beegan Magaalada Dhuusamareeb.
Saraakiisha Ahlu Sunna ayaa sheegaya in haatan uu bartilmaameedkooda koobaad yahay maleeshiyda Al-Shabaab, si ay kaga saaraan deegaanada ay kaga sugan yihiin Galmudug.
“Ahlu Sunna Waljameeca taladeedu waxa ay tahay in qaabkii ay u shaqeynayeen, oo ahayd inay cadowga ka dulqaadaan ummadda Soomaaliyeed, dadkooda iyo shacabkoodana ay u hiiliyaan mar kasta, oo ay uga baahdaan,” ayuu yiri Cabdisalaan Aadan Xuseen.
“Ahlu Sunna Waljameeca mar kasta waxay ku baaqeysay nabadda, haddana nabadda ayay ku baaqeysaa,” ayuu yiri Cabdisalaan Aadan.
Cabdisalaan Aadan ayaa Dowladda Federaalka iyo Maamulka Galmudug ku eedeeyay in aanay dhab ka ahayn la dagaalanka Ururka Al-Shabaab, halka Ahlu Sunna ay ka go’an tahay inay wiiqdo maleeshiyada Al-Shabaab, sida uu yiri.
“Hadafka Ahlu Sunna Waljameeca ay mar kasta u taagan tahay waa hadaf cad, oo ah in lagala dagaalamo cadowga ummadda Soomaaliyeed dhiigga ka jaqaya,” ayuu yiri Cabdisalaan Aadan.
“Ahlu Sunna waxay aragtay fursad ay dareensan tahay inay ku soo rogaal celin karto. Waxayna fursadaasi ka dhalatay dagaalada qabaa’ilada ee deegaanka ku soo batay iyo Shabaabka oo caqabad ku noqday gobolka, waxaana fursadaasi abuuray Maamulka Galmudug. Waxay rabaan siyaasad ahaan in dib u qabsadaan mamaulkii horey looga saaray, oo ay buuxiyaan meelaha ay dabacsanaanta ka jirto,” ayuu yiri Cabdisalaan Yuusuf Guuleed.